China 2BEX Vacuum Pump mpanamboatra sy mpamatsy | KAIQUAN
Haavo haben'ny rivotra: 150-27000m3 / h
Isan'ny tsindry: 33hPa-1013hPa na 160hPa-1013hPa
2BEX Vacuum Pump tombony:
1. Fihetsiketsehana tokana, fizarana axial ary fanalefahana, rafitra tsotra, fikojakojana mety. Ny paompy misy kaliberaly lehibe dia miaraka amina seranan-tsambo marindrano koa, izay mety amin'ny mpampiasa. Ampiana amin'ny valizy mandeha ho azy mba hifehezana ny haavon'ny rano manomboka amin'ny paompy mba hisorohana ny fanombohana be loatra.
2. Ny endrika faran'ny impeller dia mandray endrika voahitsaka, izay mampihena ny fahatsapana ny paompy amin'ny vovoka sy ny fikorontanan'ny rano amin'ny mpanelanelana. Mpanaparitaka lehibe Ny firafitry ny peratra fanamafisana impeller dia nohatsaraina mba hisorohana ny fihazonana ireo loto ary hanatsara ny fiantraikan'ny fanodinkodinana amin'ny paompy.
3. Ny fampiasana firafitry ny vatan'ny paompy misy fizarazarana dia afaka manamboatra paompy iray hifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fepetra asa roa samihafa.
Teo aloha: Paompy vakumana 2BEK
Tabilao Structural Pump 2BEX
2BEX Vacuum Pump Spectrum diagram sy famaritana